Labada Shariif oo kulankoodii sedaxaad isku mari waayay | raascasayrmedia.com
← Somaliya oo lagu tilmaamay dalka Adduunka ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka madaxa looga jiro.
Madaxwayne Dooxajoog oo gaaray Dagmada Murcanyo →
May 21, 2011 · 5:57 pm
Labada Shariif oo kulankoodii sedaxaad isku mari waayay
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyaha Barlamanka Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta isku mari waayay kulankoodii sedaxaad oo maalmahaan ay ku yeelanayeen magaalada Muqdisho.
Kadib kulan ay maanta ku yeesheen xarunta madaxtooyada eee Villa Soomaaliya Madaxweynaha DKMG Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyaha Barlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan kaasi oo looga hadlayay xalinta khilaafka u dhaxeeya masuuliyiin ugu sareysa dowladda KMG iyo sidii doorasho ay uga dhici laheyd gudaha dalka ayaa ku soo dhamaaday natiijo la’aan.
Kulankaani oo ahaa kii sedaxaad oo mudo todobaad gudihiis ah ay yeeshaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha Barlamanka ayaa markii uu soo gaba gaboobay waxaa saxaafada la hadlay xildhibaan Cumar Islow oo ah xogheynta Barlamanka kaasi oo sheegay in qodobadii labada dhinac ay ka hadlayeen ay ku soo dhamaadeen iyagoo aan laga gaarin wax natiijo ah.
Xildhibaan Cumar islow sidoo kale waxa uu sheegay in aysan marnaba ka laaban doonin go’aankoodii ahaa in doorasho madaxtinimo ay dhacdo ka hor bisha August, waxuuna carabka ku dhuftay in hadii is hortaag lagu sameeyo doorashadaasi uu dalka gali karo marxalad adag isagoo tilmaamay in ay badan karaan maamul goboleedyada.
Sedaxdii maalin ee la soo dhaafay ayaa xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxaa ka soconayay kulan u dhaxeeyay madaxweyne Shariif iyo gudoomiye shariif Xasan Sheekh Aadan kuwaasi oo la doonayay in lagu xaliyo khilaafka labada masuul oo cirka isku sii shareeray bilihii ugu dambeeyay.